WaterMinder, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
WaterMinder, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Andro iray hafa, fampiharana iray hafa izay azontsika alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka fampiharana iray mifandraika amin'ny fahasalamantsika izahay: WaterMinder. Ity rindranasa ity, araka ny azonao an-tsaina tsara ilay anarana, dia fampiharana mifanaraka amin'ny Apple Watch izay dia hampahatsiahy antsika hisotro rano, ary rehefa manao izany isika Tokony hamafisinay ny fampandrenesana mba hahalalanareo amin'ny fotoana rehetra ny habetsaky ny rano nisotroanay mba hivezivezy foana. WaterMinder dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azo alaina maimaim-poana.
Mampatsiahy antsika indraindray ny WaterMinder amin'ny alàlan'ny fampandrenesana amin'ny Apple Watch sy ny iPhone fa tonga ny fotoana fisotroana. Miorina amin'ny lanjanay ny fampiharana mba hanoroana ny habetsaky ny rano fa tsy maintsy misotro isika hahatratra ny tanjontsika isan'andro. Noho ny kisary sy ny isan-jato asehon'ilay rindrambaiko dia fantatsika amin'ny fotoana rehetra hoe inona ny haavon'ny hydration antsika.
Ny rano fisotro dia natolotra hatrany, indrindra amin'ireo olona matavy loatra, satria amin'ny alàlan'ny urine ny tavy izay laninay isan'andro sy ireo izay notehirizin'ny vatana dia voaroaka. Manampy ny voa hiasa kely koa io. Saingy tsy tadidintsika foana ny adidy misotro rano raha te hitazona ny vatantsika ho salama isika.
WaterMinder dia mifangaro amin'ny HealthKit hahazoana ny lanjanay, ny maha-lahy na vavy ary ny daty nahaterahantsika mba hahafahana mikajiana hoe inona ny fatra rano atolotray isan'andro. Tsy fampiharana manome antsika fampahalalana momba ny fahasalamantsika izanyMampatsiahy antsika fotsiny fa ny rano fisotro dia zava-dehibe amin'ny vatantsika ary tsy manimba koa izy io, na oviana na oviana ny rano sotroina. WaterMinder amin'ny fiteny espaniola, mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, iPod touch ary Apple Watch izy io. Izy io dia mitana 90 MB ary manana isa salan'isa ny kinova farany kintana dimy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » WaterMinder, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Yalu Jailbreak iOS 10.2 Source Code (Tsy feno) Azo alaina izao
Tsia, iOS 10.2.1 koa tsy manamboatra olana momba ny bateria iPhone